MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA CAVAPOO IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Cavapoo iyo Sawirro
Cavalier King Charles Spaniel / eeyaha isku dhafan ee Poodle
Charlie the Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel / Poodle mix) qof weyn (fiiri sawirka yar ee hoose), sawir qadarin leh Ayers Pampered Pets
adhijirka Australiyaanka ah iyo feeryahan isku jira
Cavapoo maahan eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Cavalier King Charles Spaniel iyo Poodle . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Cavapoo
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Ey Dhismaha Cavapoo
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Cavapoo
Diiwaanka Taranka Nakhshadeeye = Cavapoo
'Tani waa Lucy. Iyadu waa Cavapoo, oo halkan Australia aan ugu yeerno Cavoodle. Iyadu waa 11 toddobaad jir iyo eey ugu fiican. Habeenkii ugu horreeyay ee aan helno waxaan galiyay qol jilicsan oo daboolkiisu kor u socdo, laakiin waxaan ku xirmay musqusha. Way yara ooyday, habeenkiina hal mar ayey soo toostay. Habeenkii 4, ma aysan yeerin cod markii aan galiyay mana aysan kicin ilaa 6:30 am. Way fududahay in la tababaro, oo fadhiisato, fadhiisato, ka tagto oo taabato amarrada 9 toddobaad. Iyadu waa mid cayaareed, laakiin sidoo kale waxay jeceshahay inay ku salaaxdo sariirta. Way ku fiican tahay carruurta waxayna si fudud u qabatay gurigeenna. Weli way oydaa maalinta aan ka tagno ... laakiin way fiicantahay markaan guriga nimaadno, oo kaliya waxay rabtaa inay nala soo jiido. Waxay jecel yahay in la calaaliyo , laakiin ma calaliyo alaabta guriga, faro badan iyo dhir. Way yara daadineysaa, laakiin ma hubo in taasi ay tahay wax eey, iyo sababta oo ah waxaan ka baxeynaa xilligii jiilaalka halkan. Iyadu waa eyda ugu fiican.
'Kani waa eeygeyga oo Sloopy Cavapoo jira 7 bilood jira. Runtii waa macaan oo caqli badan. Wuxuu garanayaa sida loo fadhiisto, istaago, la joogo, loo jiifo, loo rogo, loo yeero gambaleel si banaanka / weel loo baxo, hoos loo dhigo, socodka dayaxa, boodboodka, soo qaadka, kaalay (sikastaba wuxuu yimaadaa oo keliya markuu dareemo sida uu yahay inkasta oo uu garanayo amarka), boostada, dhunkashada, iskaga tag oo tuur. Wax walba oo aan baray isagaa bartay maalintaas oo gebi ahaanba waa la wada qoray laba bilood gudahood (dhibaatadiisa ugu weyni waxay ahayd inuu helo uun hab uu iigu sheego sida loo baxo, markaa anigu waxaan u helay dawanno). Wuxuu jecel yahay martida guriga, laakiin wuu ka xishoodaa dadka xaafadda. Isaguba aad ayuu daacad u yahay oo meel walbuu i raacaa Haddii aan ka soo daaho daraasadda wuxuu ku dadaalayaa inuu soo jeedo ilaa aan seexanayo. Wuu inyar isku xidhan yahay maxaa yeelay wuu ooyaa markaan musqusha ku jiro oo wuxuu noqday asaag hoosaadsan bishii ugu horaysay ee aan bartay sida loo iska indho tiro ilaa aan bannaanka u baxno oo aan ka joojinayo. Sidoo kale runti wuu u jilicsan yahay carruurta yaryar. Si kastaba ha noqotee, waxaan ogaaday inuu danayste la yahay xayawaanka kale. Markuu ag joogo eeyga hooyaday (Doberman uusan ka baqayn) wuxuu xadayaa alaabada ay ku ciyaaraan wuxuuna ku qarinayaa meelo aad u yar oo ay ku habboon tahay. Wuxuu jecel yahay in sariirta lagu aaso lafihiisa, helitaanka farmaajo, xadiiqada eyga, xeebta , soo qaado (tuur kubbada wuuna ciyaari doonaa saacado) iyo koolkoolin. Waxaan u adeegsaday degelkan si aan uga caawiyo helitaanka xayawaan / cilmi baaris, waxaanan u maleynayaa inuu isagu ahaa xulasho dhammaystiran mahadsanid.
Charlie the Cavapoo (Cavalier King Charles Spaniel / Poodle hybrid) sida eey (fiiri sawirka qaangaarka ah ee kor ku xusan), sawir qadarin leh Ayers Pampered xayawaanka
Lahaanshaha sawirka Shaloma Love Puppy
Eeg tusaalooyin badan oo Cavapoo ah
Sawirada Cavapoo 1
Liiska Cavalier King Charles Spaniel Mix Eeyaha Taranka
dane weyn iyo poodle isku dhafan
buurta bernese eey xadka collie
cawl iyo caddaan bulldog ingiriisiga
4 bil jir sawiro puppy puppy
rottweiler iyo Jack Russell isku darka